လမ်းပြကြယ်: စစ်အစိုးရ ရွေးကောက်ပွဲရက်ကြေငြာလိုက်ပြီ
စစ်အစိုးရပိုင် ရုပ်မြင်သံကြားမှ ရွေးကောက်ပွဲရက်ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ ကို သတ်မှတ်လိုက်သည်ဟု ကြေငြာသွားပါသည်။
စစ်အစိုးရကြေငြာချက်အရ နိုင်ဝင်ဘာလ(၇)ရက် ရွေးကောက်ပွဲ အပြီးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွတ်ပေးရန် မျော်လင့်ရကြောင်း အင်တာနက်ပေါ်တွင် သတင်းများထွက်ပေါ်လာပါသည်။
ထိုသတင်းကို AAPP မှ ကိုဘိုကြည်က ဂရုမေလ်းသို့ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
Myanmar sets November7election date (Urgent)
Aug 13, 2010, 5:23 GMT
Yangon - Myanmar's election commission has set November7foramuch-awaited general election, national television announced. Military-ruled Myanmar, also called Burma, last held an election in 1990.
Dates related to Daw Aung San Suu Kyi’s Case
Date SPDC accused of the Case:5May 2009
Date of the submission of the complaint: 11 May 2009
Date she was taken to Insein Prison: 14 May 2009
Date of the first court hearing: 18 May 2009
Date sentenced: 11 Aug 2009
We have no idea that starting from when the SPDC counts Daw Aung San Suu Kyi’s sentence.
If the election date is on7November 2010, Daw Aung San Suu Kyi’s release date will be after the elections.